Pazuva rakafanana nanhasi, François Mauriac, akahwina Mubayiro weNobel, akafa muna 1952 | Zvazvino Zvinyorwa
Pazuva rakaita nhasi, François Mauriac, akahwina Mubayiro weNobel, akashaya muna 1952
Mugore 1970, asi Pazuva iri François Mauriac, akahwina Mubayiro weNobel, akafa muna 1952. Munyori wechiFrench akaberekerwa muBordeaux, pamusoro pekuve munyori, aive mutori wenhau uye mutsoropodzi, uye akaonekwa semumwe wevanyori veKaturike vakanakisa vezana ramakore rechiXNUMX.
Pakati pezvakasiyana, zvinotevera zvinomira pachena:
Muna 1933, akagadzwa Nhengo yeFrance Academy.
Muna 1952, akaziviswa Mubayiro weNobel muMabhuku.
Uye pakupedzisira, muna 1958, iyo Grand Muchinjikwa weLegion yeKukudzwa.
Anonyanya kushanda mabasa
Mamwe emabasa ake anozivikanwa ndeaya:
"Kutsvoda kune ane maperembudzi" (1922), iro bhuku rakamuisa.
"Gwenga rerudo" (1925).
«Knot of Vipers » (1932).
"Asmodeus" (yake yekutanga yemitambo novel muna 1937).
«Gwayana " (1954).
«Wechidiki kubva kune dzimwe nguva» (1969).
"Maltaverne" (posthumous basa rakaburitswa muna 1972).
Tinogona kutaura izvozvo François Mauriac aive mumwe wevanyori vakashinga kuita chero chinhu: kubva nhetembo (mabhuku ake maviri ekutanga aive nhetembo), kusvikira kudzidzira, kutsika senge iyo iyo novel uye ushingi naye theatre (Mune yekupedzisira akagamuchira kumwe kushoropodzwa kwebasa rake).
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti pakati pebasa nebasa raive munyori wenhoroondo mumapepanhau 'L'Écho de Paris ', uye gare gare mu 'Le Figaro '.
Mitsara uye anecdote naFrançois Mauriac
Uye isu tinopfuurira neyekare muActualidad Literatura: tinotora mamwe emashoko akasiiwa nemunyori mukuru uyu munyika asati aenda. Uye pakupedzisira, diki anecdote-chirevo nezve chiitiko muhupenyu hwake:
"Handina chido chekutamba munyika umo munhu wese anobiridzira."
"Munyori akaipa anogona kuve mutsoropodzi akanaka, nechikonzero ichocho kuti waini yakaipa inogona zvakare kuve vhiniga yakanaka."
"Rufu haubi vanhu vatinoda. Pane kupesana, inozvichengetera isu uye inozvipa mweya mundangariro medu. Hupenyu hunovabira isu kakawanda uye zvirokwazvo ».
"Varume vazhinji vanotaridzika kunge dzimba dzamambo dzakasiyiwa huru: vanogara mumakamuri mashoma uye vakavhara mapapiro pausingatomboenda."
«Usavhiringidze Jesu, mudzidzisi, nevarombo varume vanomutevera kubva kure. Usatarisira kuti kusapindirana kwayo kunogona kukushandira nekusingaperi sechikonzero ».
"Kunyora kurangarira, asi kuverenga kurangarirawo."
"Kuverenga, musuwo wakazaruka kune nyika yakashama."
"Hazvibatsiri kuti munhu ahwine Mwedzi kana achinge arasikirwa neNyika."
"Zvishoma zvakadii kuvaka dzimba mudenga uye inodhura sei kuparadza kwavo!"
Uye sei chirevo chehupenyu hwako: Akatora chikamu semutyairi weambulensi muHondo Yenyika Yekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Pazuva rakaita nhasi, François Mauriac, akahwina Mubayiro weNobel, akashaya muna 1952
Gakava paElinburgh Book Fair paVadiki Vakuru
Google inoisa doodle yayo kubhuku "Nyaya isingaperi"